Deep, Dark Net
Internet အပေါ်မှာ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြတယ် မူးယစ်ဆေးဝါး လက်နက် စတာတွေ Internet အပေါ်မှာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြတယ်ဆို သင်ယုံနိုင်ပါ့မလား? ဒါမျိုးတွေ Internet အပေါ်တင်ပြီးရောင်းတော့ ရဲတွေက မဖမ်းဘူးလား လို့တွေးထင်နေပါသလား?
Internet ကမ္ဘာရဲ့ အမှောင်လောက သို့မဟုတ် ဝါယာထဲက မြေအောက်ကမ္ဘာ
တကယ့်လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာ မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိသလို Internet အပေါ်မှာလည်း အမှောင်လောကဆိုတာရှိပါတယ်။ အမှောင်လောက ဆိုတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဒုစရိုက်မှူ့တွေ ရောပြွမ်းနေတဲ့ နေရာတစ်ခုပေါ့။ Online ကမ္ဘာရဲ့ အမှောင်လောကကို Dark Web or Deep Web လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။
Deep Web ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ Internet မှာလက်ရှိ ပုံမှန် Browser တွေသုံးပြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေအားလုံးဟာ တကယ်တမ်းတော့ Internet တစ်ခုလုံးရဲ့ 10%-15% လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ကျန်ရှိနေတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း တွေကိုတော့ Deep Web လို့သိရှိထားရပါတယ်၊၊ Deep Web မှာတွေ့ရှိရမယ့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက်အလက်တွေကိုတော့ အောက်မှာ တစ်စုတစ်စည်းထဲ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အဲ့ထိ အထဲက ဖော်ပြချက်တွေဟာ စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေပြီး ပုံမှန် Internet အသုံးပြုသူတွေအတွက်တော့ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲလို့တွေးရလောက်အောင်ကို တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ ထိတ်လန့်စရာတွေ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ Deep Web တွေကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက် ရွေးချယ်စရာ Browser တွေအများကြီးထဲကမှ သင်အနေနဲ့ Tor Browser ကိုအသုံးပြုပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Deep Web အကြောင်းကို လူသိများစေတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ စံချိန်မီအရည်အသွေးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆေးခြောက်တွေ ၊ ဆေးပြားတွေ နဲ့ အက်ဆစ်များဖြစ်ပီး ၎င်းတို့ကို စနစ်တကျထုပ်ပိုးပီး အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ပေးတဲ့ စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ အခုတော့ ပိတ်ထားတဲ့ The Silk Road ဆိုတဲ့ Website ဟာ တကယ်ကို ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ ဆေးခြောက်အကောင်းစားတွေနဲ့ အခြားဘာဖြစ်ဖြစ်ရနိုင်တဲ့ အဓိကနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။
မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆို တိတ်တဆိတ် လုပ်ကိုင်ရခြင်းကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် လျှို့ဝှက်စွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် Deep Web တွေမှာကမ်းလှမ်းချက်တွေပြုလုပ်ပီး အတူတကွဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ FBI မှအချို့အချက်အလက်တွေကို Deep Web တွင်လိုက်လံဖြုတ်ချနေသော်လည်း အစိုးရရဲ့ လျိှု့ဝှက်ချက်တွေဟာ ဒီနေရာမှာထွက်ပေါ်လာဆဲပဲဖြစ်တယ်။
Deep Web တွေမှာဆိုရင် သက်ရှိလူသားအစစ်တွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ စမ်းသပ်မှုများကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်ပြနေတဲ့ နေရာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုစမ်းသပ်ဖို့ လူတွေဘယ်ကရလဲဆိုတော့ အများစုကတော့ လမ်းပေါ်က အိမ်ခြေရာမဲ့တွေကို ခေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်။ လူသားအစစ်တွေကို တစ်စစီဆွဲဖြုတ်နေတာ ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ အတော်လေးတော့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Deep Web ထဲကိုမဝင်စေချင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူသားအစစ်တွေရဲ့ စမ်းသပ်ခံဘဝကို မမြင်စေချင်လို့ပါ။ အကယ်၍ ကြည့်ချင်ရင်လဲ SAW ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသာ ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ကို သတ်ဖို့ဆိုတာ စျေးပေါပေါနဲ့တော့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာတော့ စီးပွားရေးဆန်ပေမယ့် အမှန်တကယ်ကို အလုပ်ဖြစ်တဲ့ လူတွေကိုရနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှာပြထားသလို ရောင်စုံကာလာသေနတ်မျိုးတွေပေါ့ ကစားစရာတော့မဟုတ်လောက်ဘူးနဲ့တူတယ်။ အဲ့လို လက်နက်တွေမှာယူချင်တယ်ဆိုရင်လဲ Europe မှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ သေချာပေါက် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Mouse Click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ရှိသမျှ ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား အားလုံးကို တထိုင်ထဲခန့်မှန်းနိုင်ပီး တရားမဝင် လောင်းကစားမှုတွေလဲ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်မြင်နေကျထက်စာရင် ဒီဟာကနဲနဲတော့ထူးဆန်းတယ်။ သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို လူငှါးပီး ခိုးခိုင်းတဲ့ သဘောပါ။ တကယ်လို့ အဲ့ပစ္စည်း သူ့လက်ထဲရောက်ပီဆိုရင် သင့်ဆီကို ဓာတ်ပုံပို့ပီး လက်ထဲရောက်ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုမှာဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဆီမှာ ခိုးပြီးသား ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းဖို့အတွက်လဲ စာရင်း ရှိပါတယ်။ သင်လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတိုင်း ခိုးလို့ရမယ်လို့တော့ အခိုင်အမာပြောဆိုထားခြင်း မရှိပါဘူး။
ဒီနေရာမှာတော့ သင်တစ်ခုခုကို Hack လုပ်ဖို့အတွက် Black Hacker တွေကိုငှါးရမ်းဖို့များစွာသော Website တွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်အရင်ရည်းစားဟောင်းရဲ့ Account မှအစ အစိုးရ Website ထဲမှလျို့ဝှက်အချက်အလက်တွေအထိ သူတို့တွေက ရယူပေးနိုင်ပါတယ်။
(၉) Porn (18+)
ဒါကတော့ ပြည့်တန်ဆာများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လူကို ရွေးချယ်ခေါ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Gay များတောင် ခေါ်ယူလို့ရပါတယ်။
Deep Web မှာဆိုရင် လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံတွေကို သုံးစွဲပစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာ ဖြစ်တာကြောင့် အကြွေးဝယ်ကတ်တွေရဲ့ ငွေကြေးပမာဏအမှန်ကို သိရှိပြီး ခိုးယူဖို့ စောင့်နေတဲ့ သူတွေကိုလဲ သင်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
Deep Web များက IP Address များကို ဖျောက်ပြီး Website များကို ဖန်တီးထားတဲ့အတွက် ခြေရာခံလိုက်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခုလို ရောင်းဝင်ဖောက်ကားခြင်းဆိုင်ရာတွေ နှင့် အခြားသော ဒုစရိုက်မျိုးစုံ ကျူးလွန်ရာ Online ကမ္ဘာရဲ့ အမှောင်လောက သို့မဟုတ် ဝါယာထဲက မြေအောက်ကမ္ဘာ အဖြစ် တည်ရှိနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။